EX - ABSDF: မြန်မာနိုင်ငံရှိ လေကြာင်းလိုင်းများမှ လေယာဉ်များ ရိုးရာအတိုင်း နတ်ပြနေရဟုဆို
မြန်မာနိုင်ငံရှိ လေကြာင်းလိုင်းများမှ လေယာဉ်များ ရိုးရာအတိုင်း နတ်ပြနေရဟုဆို
Tin Lay Zaw
မြန်မာနိုင်ငံရှိ လေကြောင်းလိုင်းများ လုံခြုံစိတ်ချရမှုမရှိခြင်း၊မတော်တဆ ဖြစ်မှုများ များပြားလာခြင်းတို့ကြောင့် လေယာဉ် နတ်ပြရသည့် ထုံးစံတစ်ရပ် ပေါ်ပေါက်လာကြောင်း သိရသည်။
မကြာသေးခင်ကပင် အဲယားပုဂံလေယာဉ်များ မီးလောင်ခြင်း၊ အဲယားပုဂံလေယာဉ်များ မတော်တဆဖြစ်ခြင်း စသည်တို့အရ အဲယားပုဂံလေကြောင်းလိုင်းသည် ကမ္ဘာ့အန္တရာယ်အများဆုံး၊ စိတ်မချရဆုံး လေကြောင်းလိုင်းများစာရင်းတွင် ထိပ်ပိုင်းမှ ပါဝင်လာခဲ့သည်။
လေကြောင်းလိုင်းအသစ်များ အပြိုင်အဆိုင် ဖွင့်လှစ်လျက်ရှိသော်လည်း ခရီးသည်များ လုံခြုံစိတ်ချရမှုအတွက် မြေပြင်လေကြောင်းစစ်ဆေးရေး ပညာရှင်များ တိုးမြှင့်ငှားရမ်း အသုံးပြုလာခဲ့ကြသလို တစ်ဘက်တွင်လည်း ရိုးရား အစဉ်အလာ၊ ယုံကြည်မှုတို့အရ လေယာသ်နတ်ပြခြင်းများလည်း ပြုလုပ်လာခဲ့သည်။
အေရှားဝင်းလေကြောင်းလိုင်းသို့ အသစ်ရောက်ရှိလာခဲ့သော ATR 72-500 XY-AJQ လေယာဉ်အသစ် ရန်ကုန်လေဆိပ်သို့ ယနေ့ ဆိုက်ရောက်လာပြီးနောက် လေယာဉ်အား နတ်ပြခြင်း ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
"မော်တော်ကားတွေ အသစ် ၀ယ်စီးရင် နတ်ပြရတာတို့ ညောင်ပင်ဦးတိုက်ရတာတို့ ကြားဖူးတယ် မဟုတ်လား။ ဒီလိုပါပဲ လေယာဉ်တစ်စီး အသစ်ရောက်လာရင် ဘေးကင်းလုံခြုံဖို့၊ မတော်တဆ ဆိုတာမျိုးတွေ မဖြစ်စေဖို့ အုန်းပွဲ ငှက်ပျောပွဲနဲ့ နတ်ပြတာ နတ်တင်တာပေါ့ဗျာ။ ထုံးစံသဘောမျိုး ဖြစ်နေပါပြီ။ အဓိကကတော့ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာတွေရဲ့ ယုံကြည်မှုပေါ့ဗျာ" ဟု အေရှားဝင်းလေကြောင်းလိုင်းမှ မြေပြင်လုပ်ငန်းတာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးက ရှင်းလင်းပြောကြားသည်။
လေယာဉ်များ သက်တမ်းကြာမြင့်နေခြင်းကြောင့် စက်ချို့ယွင်းမှုများ ဖြစ်ပွားခဲ့ လျှင် ခရီးသည်များအတွက် မတွေးဝံ့စရာ ဖြစ်သလို လေကြောင်းလိုင်းနာမည် ပျက် သိက္ခာကျစေမည် ဖြစ်၍ ဘေးကင်းလုံခြုံရေးသည် အထူးပင် အရေးကြီးကြောင်း၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမြို့ပြလေကြောင်းအဖွဲ့မှလည်း လေကြောင်းလိုင်းများ ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတွက် စံချိန်စံညွှန်းများ သတ်မှတ်ထားပြီး ယင်းသတ်မှတ်ချက်များအတိုင်း အတိအကျ လိုက်နာရန် လိုအပ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
Posted by lu bo at 10:53 AM
လူသားလုံခြုံရေး (Human Security) ဆိုရာဝယ် (အပိုင်း-၁)
by Myat Thi Ha on Wednesday, December 5, 2012 at 6:39am Posted by khin ma ma myo on December 5, 2012 လူသားတွေရဲ့ဘ၀မှာ ကြောက်...
တောင်ပိုင်း မှ ထုတ်ပြန်ထားခဲ့သော ကြေငြာချက် ၂ ခုအပေါ် သုံးသပ်ချက်
Zaw Lin editedadoc . ၁၉၉၁ - ၁၉၉၂ ခုနှစ် ABSDF မြောက်ပိုင်း ပါချောင် စခန်းတွင် လူ ၁၀၀ ခန့်အား နိုင်ငံတော် ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှု တည်ဆောက်ရေ...
သစ်ထူးလွင် သတင်းစုစည်းမှု (၁၈-၁၀)
သစ်ထူးလွင် သျှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများအား အစိုးရတပ် ဖမ်းဆီးရိုက်နှက် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ပဉ္စမပုံမှန်အစည်းအဝေး၌...
သစ်ထူးလွင် သတင်းစုစည်းမှု (၁-၇)
သစ်ထူးလွင် ဘာပြောပြော ဆင်ပေါ်က ဇေကမ္ဘာ သာသနာရေးဝန်ကြီး ဦးဆန်းဆင့်ကို တရားစွဲမှု ပြည်သူများ ဆန္ဒပြ မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့တွ...
Lu Cifer ခုပဲ ကိုယ့်အချင်းချင်းထဲက အချိန်ကိုက် အရောင်အမျိုးမျိုးပြောင်းသွားတဲ့လူတွေကိုပြန်ကြည့်နေတာ ၊ ပြောသာပြောတာ သူတို့လဲ ကိုယ်...
ရွှေအိမ်စည်စာကြည့်တိုက် - စာပေဒါနပြုသည် နေရာစုံက ရလာပါသည်(Tun Aung Kyaw) ခင်ခင်ထူး - ၀တ်လဲတော်ရွှေပုဆိုးတန်းထိုးလို့ကြိုမယ်.pdf...
ဒီမိုကရေစီအတွက် ရုန်းကန်ကြ - အမှတ်စဉ် (၁၀) မျိုးသန့်
by Myo Thant on Sunday, December 23, 2012 at 9:36pm · တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဟာ ဒီမိုကရေစီစနစ်၏ အဓိက ကျောရိုးဖြစ်တယ်။ စနစ်တ...
မျက်နှာစာအုပ်၊ ဦးပိုင် ၊ ဘတ်ဂျက် နှင့် မျက်ရည်ချူ ဆောင်းပါးများ
Seaman Nayminthu and3other friends shared Ye Moe 's photo . ၏မြန်မာပြည်မှာ….. အမှား ကြာရင် .... အမှန် ဖြစ်သွားတတ...
ဆောင်းပါးရှင်။ အောင်လင်းထွဋ် တပ်မတော်သည် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းခေါင်းဆောင်သောရဲဘော်သုံးကျိပ် သွေးသောက်သစ္စာဂတိပြု ကာပြည်သူ၏ အသ...
သစ်ထူးလွင် သတင်းစုစည်းမှု (၂၈-၂)
ရုန်းရင်း နစ် ... ဖောင်ပေါ် က ရေငတ်နေသူများး
သစ်ထူးလွင် သတင်းစုစည်းမှု (၂၇-၂)
ခေါင်းဆောင်မှုနှင့် စိတ်စွမ်းအင် (၂)
သစ်ထူးလွင် သတင်းစုစည်းမှု (၂၆-၂)
Miss Myanmar ခင်ဝင့်ဝါအတွက် ဆုနှစ်ဆုကို Global Bea...
- လက်တွေ့ကျသူ ခေါင်းဆောင် (ခိုင်မာသော ပန်းတိုင်၊ေ...
သစ်ထူးလွင် သတင်းစုစည်းမှု (၂၅-၂)
တရုတ် မှောင်ခို ဈေးကွက် မှာ တန်ဖိုး မြင့်တက် လာတဲ...
သစ်ထူးလွင် သတင်းစုစည်းမှု (၂၄-၂)
မြန်မာနိုင်ငံမှ ဂန္ထဝင်ဇာတ်လမ်း တစ်ပုဒ်
ဒီဗွီဘီ လာဘ်စားမှုသတင်းအကြောင်း အမြီးသဘောလောက်ပြော...
သစ်ထူးလွင် သတင်းစုစည်းမှု (၂၃-၂)
သစ်ထူးလွင် သတင်းစုစည်းမှု (၂၂-၂)
၂၀၁၅ အလွန် နိုင်ငံရေးဟောစာတမ်း
သစ်ထူးလွင် သတင်းစုစည်းမှု (၂၁-၂)
မြန်မာ့ရွှေအိုး ထမ်းချိန်ကို မြင်ချင်ပါသည်
ဘ၀မှာ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ညီညွှတ်တဲ့ တိုက်ပွဲ
သစ်ထူးလွင် သတင်းစုစည်းမှု (၂၀-၂)
၁၉၈၈ အောက်တိုဘာ (အသက် ၂၃နှစ်)ရောက်မှ မိမိသည် မဟာဗမ...
သစ်ထူးလွင် သတင်းစုစည်းမှု (၁၉-၂)
ကြောင် ဖြူဖြူ၊ နက်နက် အသားစားတတ်တာတော့ အတူတူပဲ
သစ်ထူးလွင် သတင်းစုစည်းမှု (၁၈-၂)
ကြီးသန်း (နိုင်ငံရေးအတွက် ကိုယ်ကျိုးစွန့်အနစ်နာခံသ...
"Politicians for Sasana"
ဆရာကျော်ဝင်း - အပြောင်းအလဲနှင့် စဉ်းစားစရာများ (၁)...
သစ်ထူးလွင် သတင်းစုစည်းမှု (၁၇-၂)
သစ်ထူးလွင် သတင်းစုစည်းမှု (၁၆-၂)
ကန္နားစည်းဇာဇာနှင့် နတ်ထိမ်း ၂ ယောက်
မိဘပြည်သူများသို့ ပန်ကြားခြင်း (၁/၂၀၁၄)
ခံစားသူ နဲ့ စံစားသူ
"မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားများ ဒီမိုကရက်...
သစ်ထူးလွင် သတင်းစုစည်းမှု (၁၅-၂)
ဘ၀ပေါင်းများစွာ ထိခိုက်စေနိုင်သောအလွဲများ (ကျော်ကိ...
သစ်ထူးလွင် သတင်းစုစည်းမှု (၁၃-၂)
“နင် တို့ ထောက်လှမ်းရေးလား၊ ဖမ်းလေ အခု ငါ့ ကို ဖမ်...
သစ်ထူးလွင် သတင်းစုစည်းမှု (၁၂-၂)
ဗုံး ၂ လုံးလောက်ကြဲပေးပါ
သစ်ထူးလွင် သတင်းစုစည်းမှု (၁၁-၂)
သစ်ထူးလွင် သတင်းစုစည်းမှု (၁၀-၂)
သစ်ထူးလွင် သတင်းစုစည်းမှု (၉-၂)
သစ်ထူးလွင် သတင်းစုစည်းမှု (၈-၂)
ရွေးကောက်ပွဲအလွန် မြန်မာ့နိုင်ငံရေးကို ရှုမျှော်ကြည...
သစ်ထူးလွင် သတင်းစုစည်းမှု (၇-၂)
ကမ္ဘာ့သမိုင်းတွင် အကြီးကျယ်အခမ်နားဆုံး ခံတပ် Fort B...
သစ်ထူးလွင် သတင်းစုစည်းမှု (၆-၂)
``သူငယ်ပြန်သူများနှင့် နိုင်ငံတော် အနာဂတ်....´´
သစ်ထူးလွင် သတင်းစုစည်းမှု ( ၅-၂)
၀န်ကြီး ဦးအုန်းမြင့်၏ ပြောစကားနှင့်ပါတ်သက်၍ ပြည်သ...
ဓါတု လက်နက်စက်ရုံမှုခင်းအပေါ် ဥပဒေကြောင်း သုံးသပ်ချက...
သစ်ထူးလွင် သတင်းစုစည်းမှု (၄-၂)
၅၉ ( စ ) တစ်ခုကိုပဲ ပြင်ချင်ကြသလား . . .
စစ်သွေးကြွဇာတိမာန်ဝါဒ - ဂျင်ဂျိုအစ်ဇင်မ် ( Jinjois...
သစ်ထူးလွင် သတင်းစုစည်းမှု ( ၃-၂)
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ပညာတစ်ခု ပြန်လည်မွေးဖွားမယ်
သစ်ထူးလွင် သတင်းစုစည်းမှု (၂-၂)
သစ်ထူးလွင် သတင်းစုစည်းမှု (၁-၂)
မြန်မာနိုင်ငံရှိ လေကြာင်းလိုင်းများမှ လေယာဉ်များ ရ...
င့ါအဖေ... မြန်မာ င့ါအမေ... မြန်မာ
သစ်ထူးလွင် သတင်းစုစည်းမ (၃၁-၁)